Qeybta 1: Waa maxay PhoneClean
Qeybta 2: ugu fiican PhoneClean Alternative - Wondershare SafeEraser
Ilaalinta aad iPhone nadiif ah waa mid aad u muhiim ah in habab badan dadka ugu ogaan. Tani waa sababta isagoo software in uu baaritaanku aad iPhone iyo hubisaa in macluumaadka gaarka ah ee aan la xaday karo waa muhiim. Qalab A si loo hubiyo in aad iPhone weli gaarka loo leeyahay waa PhoneClean. PhoneClean si fiican uu baaritaanku aad iPhone si aad u hesho dhammaan macluumaadka aad ku jiri kara macluumaadka gaarka ah.
Xogtaan ayaa inta badan ka kooban fariimaha oo dhan, taariikhda dhirta, wac taariikhda, emails iyo xitaa Safari Kukiyada. Waxaad markaas aad u hesho si ay u doortaan, taas oo iyaga ka mid ah waxaa laga saari doonaa qalab aad si loo hubiyo in macluumaadka gaarka ah.
Marka laga reebo ilaalinta macluumaadka gaarka ah ee gaarka loo leeyahay, PhoneClean kale oo ay bixisaa user la tiro ka mid ah faa'iidooyinka kale. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
PhoneClean bixisaa user xal one stop ay Gordhaw Kadhoofaan Nadiifinta iyo ayna a
Waa halis lacag la'aan ah iyo sidoo kale lacag la'aan ah inkastoo uu jiro hagaajinta lacag taas oo macnaheedu yahay waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah muuqaalada ma shaqeeyaan version xorta ah.
Waxay isticmaalaan in ka badan 20 teknoolajiyada taxliilin iyo baabiin karta in ka badan 30 nooc oo files junk ka iPhone.
Kordhin kartaa xawaaraha iPhone iyo qaab hal click
Maqaallo ah qalab iPhone kale oo dhowr ah in iman karo ee ku anfacaya in aad nolol maalmeedka
PhoneClean uusan si kastaba ha ahaatee la iman tiro ka mid ah dhibaatooyinka dadka isticmaala. Halkan waa wax yar oo ka mid ah;
Waxay qaadataa waqti dheer software-ka si ay u dhamaystiraan baaritaan si aad u ma isticmaali kartaa haddii aad ka yar kooban waqtiga.
Inta lagu guda jiro habka iskaanka ah, ma jiraan wax hako ama biloow badhamada taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay si aad sugto nidaamka si uu u dhameystiro.
Inta badan dadka isticmaala jeclaan lahaa inuu arko khiyaar ah in ay doortaan files ay halkii ay badbaadin lahaa
Sidoo kale ma tusin user faylasha in la tirtiro doonaa. Dadka intooda badan waxay doonayaan inay ogaadaan waxa la tirtiray taleefanada ay nabadda ee maskaxda.
Qaar ka mid ah dadka sida habka iskaanka in aan waqti badan oo ay leeyihiin qaadan doonaa. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka la qiimeeyo waqti aad iyo aad jeclaan lahayd kale ah PhoneClean in aad ka bixin doontaa dhammaan faa'iidooyinkiisa iyo mid ka mid ahaa ugu khasaaraha PhoneClean, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad baadhid Wondershare SafeEraser . Wondershare SafeEraser sameeyaa wax ka badan kaliya baarista iPhone oo aad warbixinta gaarka ah ee gaarka loo leeyahay. Qaar ka mid ah qaababka ay ka mid ah:
SafeEraser hubinayaa in dhammaan xogta gaarka ah waxaa si joogto ah la tirtiro si loo hubiyo gaarka ah ugu badnaan.
Waxa kale oo kayd cad iyo taariikhda dhirta si ay u ilaalin doonaan macluumaadka login khaaska ah
Hubisaa in files tirtiray ma waxay yihiin
SafeEraser sidoo kale ogolaan kartaa in aad masixi qalab aad si joogto ah haddii taasi waxa weeye waxa aad rabto
Kuu ogolaanayaa inaad doorato faylasha aad rabto inaad ka masixi iyo kuwa aad jeceshahay in aad sii
US isticmaalaa habka Military ah oo burburiyey xogta sida in macluumaadka gaarka ah ee aan la soo kabsaday karo
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan dheeraad ah meel lagu kaydiyo qalabka aad by tirtiro faylasha qaar ka mid ah
Waxaad isku dayi kartaa Wondershare SafeEraser lacag la'aan ah muddo 15 maalmood
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser si aad u nadiifiso aad iPhone
Wondershare SafeEraser waa xal 1 click nadiifinta aad iPhone. Waa degdeg ah oo hufan. Halkan sida ay u nadiifiyaan aad iPhone isticmaalaya codsigan in ay fududahay in la raaco tallaabooyinka.
Talaabada 1: Ka dib markii la rakibey, Run SafeEraser ka dibna xirmaan aad telefoon si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB. Codsiga waa in la ogaado oo muujiyaan telefoonka sida hoos ku qoran.
Talaabada 2: 5 muuqaalada bidixda, dooro 1-Guji Nadiifi.
SafeEraser si toos ah qalab aad iskaan doonaa sida image hoose.
Tallaabada 3: Marka geedi socodka iskaanka waa dhameystiran (ma qaadan aad u dheer), wadarta guud ee files junk lagu soo bandhigi doono suuqa kala dhashay sida ku cad image hoose.
Dhamaan inaad hadda samayso waa guji "Nadiifinta" iyo codsiga lacag la'aan doonaa meel bannaan oo ku saabsan iPhone by baabi'inta dhan files junk. Waa arrin aad u muhiim ah in aad sii iPhone ku xiran inta ay socoto oo dhan si loo hubiyo in si sax ah loo sameeyaa.
Ugu dambeyntii, Wondershare SafeEraser idin tusin doonaa suuqa kala hoos ku qoran in si cad u muujinaysaa in Nadiifinta waa dhameystiran iyo baaxadda guud ee files ka saaro.
Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Home" inuu ku soo laabto uu furmo suuqa weyn ama "Rescan" in geeddi-socodka oo dhan mar kale bilaabaan.
Sida loo tuso tallaabooyinka fudud kor ku xusan, Wondershare SafeEraser ka dhigaysa habkan mid aad u fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa furaysto in aad telefoon oo la siiyo codsiga ah amarrada yar. Tani waxay sare ee xaqiiqda ah in codsiga badan oo dheeraad ah ku samayn karaa oo kaliya masixi files junk rabin yahay waxa ay ka dhigeysaa SafeEraser kale oo ku fiican PhoneClean.
Wondershare SafeEraser Guudmarka Video
> Resource > iPhone > PhoneClean Alternative: Sidee loo nadiifiyaa iPhone ee 1-click